ကောင်းကင်တဲတော်အရိပ် သင်ခန်းစာ (၈)
ဘုရားသခင်က လောက၌ ကောင်းကင်၏အရိပ်တဲတော်ကို တည်ဆောက်ခိုင်းခဲ့သည်၊ ထိုအရိပ်၌ ကိုးကွယ်ချိန်ကုန်ဆုံးပြီးကြောင်းသိခဲ့ရပြီ၊ သို့သော် ထိုအကြောင်းကို မသိသောကြောင့် အမျိုးမျိုးပြုလုပ်နေသူများအကြောင်းကိုဆက်လေ့လာကြစို့ ၊
အရိပ် ကိုိ ဆက်ချင်သူ များ
ဣသရေလ လူများသည် ထို သို့ဗိမာန်တော် ပြောင်း ရွေ့ သွား ကြောင်း ကို မသိ သော အခါ ယေရုရှလင်မြို့ ရှိ ဗိမာန်တော် ၌နောက် ထပ် နှစ် ပေါင်း ၄၀ ကိုးကွယ် ခဲ့ကြသေးသည်၊ကျမ်းစာ က မဖေါ်ပြ သော်လည်း သန့် ရှင်းရာ ဌါန ကို ကာ ထားသော ကုလားကာ ကို အောက်မှ အထက် စွန်း သို့ပြန် လည်ချုပ်ကြမှာ ဖြစ်သည်၊ ထိုဗိမာန်တော် မလို တော့ ကြောင်းနှင့် ဖျက်စီးရမည့် အကြောင်း ကို သခင် ယေရှု က တပည့်တော်များထံ ဤသို့ပြော ကြားခဲ့သည်။ “ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်မှထွက် ကြွတော်မူသည်ရှိသော်၊ တပည့်တော်တို့သည်ဗိမာန်တော်၏တိုက်ဆောင်များကို ပြခြင်းငှါ အထံတော် သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏၊ ယေရှုကလည်း၊ဤအရာ အလုံးစုံကိုသင်တို့သည် မြင်ကြသည် မဟုတ်လော၊ ငါအမှန် ဆိုသည်ကား၊ မဖြိုမချဘဲကျောက်တခုပေါ်မှာ
တခုမျှမတည် မနေရဟု မိန့်တော်မူ၏” (မ ၂၄း၁-၂)၊ သခင်ယေရှုကြိုတင်ပြောထားသည့်အတိုင်းထိုဗိမာန်တော်ကိုရောမစစ်သား များက အေဒီရ၀တွင် ရှင်းရှင်းဖျက်စီးခဲ့ကြသည်၊ထိုသို့ ဖျက်စီးခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဖြစ်ကြောင်းမသိသောဤသရေလလူများသည်အေဒီ၁၃၅၌ ဗိမာန်တော် ပြန်လည်တည်ဆောက်ဘို့ရန်ကြံရွယ်သော်လည်းအထမမြောက်ခဲ့ကြချေ၊နောက်ပိုင်းတွင်မူစလင် များက ထိုဗိမာန်တော် နေရာ တွင် သူ တို့၏ ဗလီကို တည် ဆောက်ခြင်း အားဖြင့် ဣသရေလလူများကနောက်ထပ်ဗိမာန်တော်မဆောက်နိင်ရန်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးသောအစောင့်များကို ချထား သည်၊ ထိုဗိမာန်တော်နေရာကိုအခြားလူမျိုးများကပိုင်ပါကဣသရေလလူများကငွေနှင့်ဝယ်ယူ၍ သူတို့ ၏ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက် လိုက်ကြမှာ သေချာသည်၊ယနေ့ ဣသရေလလူများ၏အဓိကဆုတောင်းချက် မှာ ဗိမာန်တော် ပြန်လည်တည်ဆောက် ၍ ရှေးကကဲ့သို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဘို့ ဖြစ်သည်၊သူ တို့သည်မည်မျှပင် ငိုယိုဆုတောင်းနေစေကာမူ ဘုရားသခင်ကနားမညောင်းချေ၊ အကြောင်းမှာ အရိပ်ခေတ် ကုန်ပြီ။ ဗိမာန်တော်အစစ်၌ ကိုးကွယ်ချိန်ရောက်ပြီ၊သို့ သော်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်မှာဣသရေလ လူများ က ထို အရာကို မသိ ချေ၊ သူတို့၏ မသိခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏စိတ် ကို မပြောင်းလဲစေနိင်၊ သူတို့ သာ လျှင် ဆုံးရှုံးရသည်၊
ဣသရေလ လူများ က ထိုသို့ ဗိမာန်တော် မဆောက် နိင် သော်လည်း ရိုမင်ကက်သလိပ်များက ကမ္ဘာ့အနှံ့ နေရာ တိုင်း၌ ဗိမာန်တော်များကို ဆောက်လိုက်ကြသည်၊ထိုဗိမာန်တော် များသန့် ရှင်းရာဌါန များကို သတ်မှတ် ၍ သာမန် လူများကို ၀င်ခွင့်မပေးဘဲ သူတို့ ၏ဘုန်းကြီးများသာ လျှင် ၀င်ခွင့်ရှိကြ သည်၊ သူ တို့ ၏ ဘုန်းကြီး များ လည်း ဣသရေလ လူများ ၏ယဇ်ပုရောဟိတ် များကဲ့သို့ဝတ်ရုံရှည် များကို ၀တ်ကြသည်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် များ ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ကြသည်၊ သူတို့လည်း ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်ကိုနားမလည်သောကြောင့် ယေရှုခရစ် အားဖြင့် အကောင် အထည် ဖေါ်ပြီး ကြောင်းကိုမသိ၍ အရိပ်ကို အတုယူ လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ သည် တဲတော်ထဲသို့ ဝင်သောအခါပရိသတ်များ တိတ်ဆိတ် စွာ နေသကဲ့သို့ရိုမင်ကက်သလိပ် များလည်း ဘုရားကျောင်းထဲ၌ စကား မပြော ဘဲတိတ်ဆိတ်စွာ နေကြခြင်းဖြစ်သည်၊
ဣသရေလ လူများ က အရိပ် ကို တမ်းတလျက် နေကြ ချိန်တွင် ရိုမင်ကက်သလိပ်များကအရိပ် ၏ အတု များကို နေ ရာ အနှံ့ ပြုလုပ် ကြကြောင်း သိရပြီ၊ သို့ သော် အရိပ်လည်းမမြင်အကောင်လည်းမမြင် သော အဖွဲ့ များရှိသည်၊ ထိုသူများသည် အချို့သော ပရော်တက်စတင့်
များဖြစ်သည်၊ ပရော်တက်စတင့် များသည်ကက်သလိပ်မဟုတ်သောခရစ်ယာန်များဖြစ်သည်၊အချို့ သောပရော်တက်စတင့် များသည် အရိပ်ကို မသိ သော ကြောင့် အတု ယူဘို့ လည်းမသိကြ၊ထိုအရာသည် ဣသရေလလူများ၏ ဓလေ့ဟုယူဆသောကြောင့် အတုယူရမှန်းမသိ၊ ထို့ကြောင့် ဘုရားကျောင်း များ ကိုဆောက်၍ သန့်ရှင်းရာဌါနလည်းမရှိ၊လူတိုင်းစင်ပေါ်တက်ကာတရားဟောခြင်း၊ သီချင်း ဆိုခြင်း။ ပြဇာတ်များပြခြင်း။ သူတို့လိုချင် သလို အသုံးပြုကြ သည်၊ထို့ ကြောင့် ပရော်တက်စတင့် များ၏ ဘုရား ကျောင်း များသည် ပွဲရုံ ဇာတ် ရုံ များကဲ့သို့ဆူညံ
နေ ခြင်းဖြစ်သည်၊ပရော်တက်စတင့်များသည် အရိပ် အကြောင်း မသိ သော ကြောင့် အကောင်အထည်ကိုလည်း ကောင်းစွာ မသိ၊ ထို ကြောင့် ဘုရားသခင် ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို ကိုးကွယ်ကြသည်၊ ကျမ်းစာ လည်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းသာ အဓိက ထား၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအသုံးပြုသော
သူများကို အထင်သေးသည်၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် ငါတို့ နှင့်မဆိုင်။ ငါ တို့ သည် ဓမ္မသစ် အသင်းတော်များဖြစ်သည် ဟု ဆိုတတ် ကြ သည်၊
သင်းအုပ်ဆရာများကိုလည်းယဇ်ပုရောဟိတ်များဟုထင်မှတ်ကြသည်၊ယဇ်ကောင်များလည်းအလှူငွေနှင့် အကျင့်သီလများ၊ ဟု ထင်မှတ် ကြ သည်၊ ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသော်လည်းခရစ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမသိကြ၊ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နိင်ငံရောက်နိင်ရန် မှာမိမိ တို့ ၏ အကျင့် နှင့် ဆက်ကပ်မှုကို အားကိုးလာ ကြသည်၊ သို့သော် မိမိ ကိုယ်ကိုမပြည့်စုံမှန်း သိနေသောအခါကောင်းကင် နိင်ငံသို့ ရောက်မည် ဟု စိတ်မချ နိင်ခြင်းဖြစ်သည်၊လောက၏ပူဇော်ခြင်းဘုရားကိုးကွယ်ခြင်းသည်ကိုးကွယ်သောသူ၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မကြည်လင်စေနိုင်။
“ထိုတဲတော်ကား ပူဇော်သက္ကာနှင့်ယဇ်များကို ပူဇော်သော ကာလတည်းဟူသော မျက်မှောက်ကာလပလုံး ပုံပမာ ဖြစ်၏။ ပူဇော်သက္ကာနှင့် ယဇ်များတို့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသောစိတ်ကို ထောက်လျှင်လည်း၊ ၀တ်ပြုသောသူအား စုံလင်ခြင်း အကျိုးကို မပေးနိုင်” ဟု ဆိုသည်။ (ဟေဗြဲ ၉း၉)။ ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသောစိတ်ကို စုံလင်ခြင်းကို မပေးနိုင်ဆိုခြင်းသည် သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မကြည်လင်စေနိုင်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားကိုးကွယ်သော်လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်မည် မရောက်မည် မသေချာ၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းမှ လွတ်ခြင်း မသိ။ ထိုကြောင့် ဘုရားကိုးကွယ် ဘို့ရန် လည်း အားမရှိ။ ထုံးစံရှိသောကြောင့် ၄င်း၊ အခြားသူများကိုးကွယ်သောကြောင့်သာ ကိုးကွယ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
ဂဏန်း သင်္ချာ တွက်ရာတွင် အပိုင်း သုံးပိုင်းရှိသည်။ မေးခွန်း တွက်နည်းနှင့် အဖြေတို့ ဖြစ်သည်။ ပဌမဦးဆုံး မေးခွန်းကို ဖတ်၍ သိမှသာလျှင် တွက်၍ရသည်။ တွက်နည်းမှန်မှ အဖြေမှန်ရနိုင်ကြောင်း လူတိုင်းသိသည်။
ဣသရေလ လူများသည် ဂဏန်းတွက်နေသော်လည်း အဖြေမရနိုင်ဘဲရှိသည်။ နောက်ဆုံး၌ အဖြေမရဘဲ တွက်နေသောကြောင့် တွက်ရင်း တန်းလန်းနှင့် ရပ်ခိုင်းလိုက်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ထို့ကြောင့် ကသိကအောင့် ဖြစ်၍ ဆက်တွက်ဘို့ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။ သို့သော် အခွင့်မရတော့ချေ။ ဆိုလိုသည်မှာ ဣသရေလ လူများ၏ဗိမာန်တော်၌ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အရိပ်ဖြစ်၍ အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်ဘဲ ဆက်၍ပူဇော်ချင်ကြသည်။ ယနေ့တိုင် အားမလိုအားမရ၊ ထိုအခွင့်အရေး ရဘို့ရန် စေါင့်မြော်နေကြသည်။ သို့သော်မည်မျှပင် စေါင့်မျှော်နေစေကာမူ ဘုရားသခင်က ခွင့်မပြုတော့ချေ။
ပရောဖက် ဟောရှေ ဟောထားသောအရာ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သည့်ကာလ ဖြစ်သည်။ ဟောရှေက၊ “ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည် နေ့ရက်များစွာ ရှင်ဘုရင်မရှိ၊ မင်းသားမရှိ၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမရှိ၊ ဆင်းတုမရျိ၊ တေရပ် ရုပ်တုမရှိဘဲ နေရကြလိမ့်မည်။” (ဟော၊ ၃း၎) ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည် အေဒီ ၇၀ မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါး ယဇ်မပူဇော်ဘဲ နေရပြီ။ ရုပ်တု ဆင်းတုလည်း မကိုးကွယ်၊ ထာဝရဘုရားထံ၌လည်း ယဇ်မပူဇော်နိုင်တော့ချေ။
ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ ဂဏန်းတွက်၍မပြီးနိုင်သော်လည်း ရိုမင်ကက်သလိပ်များက သူတို့နည်းတူ မပြီးပြတ်နိုင်သော ဂဏန်းကို တွက်နေ ကြသည်။ သို့သော် ရိုမင်ကက်သလိပ်များသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကဲ့သို့ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများ မလုပ်ဘဲ ဟန်ပြသာ လုပ်နေကြသည်။ သူတို့၏ ဘုန်းကြီးများက ယဇ်ပုရောဟိတ်ကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်ကာ ဟန်လုပ်နေကြသည်။
ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့်ရိုမင်ကက်သလိပ်များက ဂဏန်းတွက်၍ မပြီးနိုင်ချိန်တွင် မေးခွန်းကိုလည်းမသိ၊ တွက်နည်းလည်းမသိ၊ တွက်လည်းမတွက်ဘဲ အဖြေသာလျှင် ရရှိနေသော သူများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိုသူများသည် ပရော်တက်စတင့်များပင်ဖြစ်သည်။ ပရော်တက်စတင့် များ သည် အရိပ်ကိုလည်းမမြင်၊ အကောင်လည်းမမြင်၊ သို့သော် အဖြေရနေသောသူဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်ကဲ့သို့အဖြေရကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြောနိုင်ဘဲ အ နေကြသည်။
ပရော်တက်စတင့်များသည် ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကဲ့သို့ ယဇ်ပရောဟိတ်များလည်း အတုမယူ (သို့သော် ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ၀တ်ရုံကြီး များ ၀တ်လာကြသည်။ အမှုတော်ဆောင်များ ၀တ်ရုံများဝတ်လျှင် ယုံကြည်သူတိုင်း ၀တ်ဘို့လိုသည်။ အကြောင်းမှာ ယုံကြည်သူများသည် ယဇ်ပုရော ဟိတ်မျိုးများ ဖြစ်သည်။(၁ပေ၊ ၂း၉)၊ ဗိမာန်တော်အထဲ၌လည်း ဆူညံစွာ ပွဲလုပ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ကြသည်။ ရိုမင်ကက်သလိပ်များမူ ဘုရားကျောင်းထဲ၌ တိတ်ဆိတ်စွာ နေတတ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ ၀င်သောအခါ ပရိသတ်များသည် အပြင်၌ တိတ်ဆိတ်စွာ နေတတ်ကြသည်။
သင်ခန်းစာ (၈) မေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူများသည် ဗိမာန်တော်၌ ဘယ်နှစ်နှစ် ဆက်ကိုးကွယ်ကြသေးသနည်း။………………………
၂။ ဗိမာန်တော်ဖျက်စီးမည့် အကြောင်းကို ခရစ်တော်က……………..များထံ ပြောပြခဲ့သည်။
၃။ ဗိမာန်တော်နေရာ၌ မည်သည့်အရာရှိသနည်း။……………………
၄။ ဣသရေလလူများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် အဘယ်အရာနည်း။…………………
၅။ မည်သူများက အရိပ်ကို အတုလုပ်နေကြသနည်း။………… ။ မည်ကဲ့သို့ အတု လုပ်ကြသနည်း။……………..
၆။ မည်သူများက အရိပ် မသိကြသနည်း။………………………..
၇။ အဘယ်ကြောင့် ကက်သလိပ်ဘုရားကျောင်း၌ တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၍ ပရော်တက်စတင့် ဘုရားကျောင်းများ၌ ဆူညံနေကြသနည်း။……………….
၈။ လောက၌ ပူဇော်သောယဇ်သည် ပူဇော်သောသူ၏စိတ်ကိုကြည်လင်စေနိုင်ပါသလော။………………………..
၉။ ဂဏန်းတွက်ရာတွင် မပြီးပြတ်နိုင်သောအဖွဲ့သည် မည်သူများဖြစ်သနည်း။………………….။ အဖြေထုတ်နိုင်သလော။………………………
၁၀။ ဂဏန်းတွပ်ခြင်းသည် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။……………………….
၁၁။ ဣသရေလလူများသည် ဟောရှေက မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ဟု ဟောခဲ့သနည်း။………………………….
၁၂။ မည်သည့်အဖွဲ့သည် ဂဏန်းကို ဆက်တွက်နေသနည်း။ ပြီးပြတ်နိုင်ပါသလော။…………………
၁၃။ အဘယ်ကြောင့် ရိုမင်ကက်သလိပ်ဘုန်းကြီးများ ၀တ်ရုံများဝတ်ကြသနည်း။………………………..
၁၄။ ဂဏန်းမတွက်ဘဲ အဖြေရနေသောသူများသည် အဘယ်အဖွဲ့ ဖြစ်သနည်း။…………………..
၁၅။ အဘယ်ကြောင့် ပရော်တက်စတင့် အမှုတော်ဆောင်များ ၀တ်ရုံများဝတ်လာကြသနည်း။……………..